Ahoana ny fomba hanokanana RAM bebe kokoa amin'ny Minecraft? - Lalao
Ahoana ny fomba hanokanana RAM bebe kokoa amin'ny Minecraft?
Misy fomba iray hampitomboana ny fampisehoana ny lalao Minecraft anao? Fantatrao ve fa ny Minecraft dia tsy miankina amin'ny RAM faran'izay betsaka amin'ny rafitrao? Misy vola manokana lanin'ny Minecraft ary tsy misy mihoatra izany. Ireo sanda ireo dia napetraka araka ny kinova sy ny mod'ny Minecraft anananao. Na izany aza, azonao atao ny manova ireo soatoavina ireo.
Amin'ny alàlan'ny fanovana dia azonao atao ny manokana RAM bebe kokoa amin'ny Minecraft ho an'ny traikefa lalao tsy miato. Eto ianao dia hianatra momba ny fomba isan-karazany amin'ny fitondrana ny fizotrany. Alohan'ny hidiranao ao dia andao hofantarintsika ny antony fampiasana RAM bebe kokoa amin'ny Minecraft.
Te hilalao Minecraft any am-pianarana? Raha eny jereo Minecraft voasakana Torolàlana ho an'ny lalao.
Fa maninona no mila RAM bebe kokoa ny Minecraft?
Minecraft dia lalao tena mahomby izay mora amin'ny famaritan'ny rafitra iray. Tsy toy ny lalao maro be amin'ny sary, tsy mila specs be loatra na GPU tsara indrindra amin'ny kilasy mba hiasa tsara. Tahaka ny Minecraft Vanilla, ny kinova sasany dia mila ambany indrindra amin'ny 2GB RAM raha tsara indrindra hitondrany anao fiainana milamina.
Noho ny fitakiana ambany-ambany sy ny fangatahana an'izao tontolo izao dia lalao tian'ny rehetra eran'izao tontolo izao izy io. Na izany aza, ny mpilalao ao amin'ny Minecraft dia mety ho lasa mamorona. Vokatr'izany dia mety hahita sarintany marobe miorina amin'ny alàlan'ny fampiasana sakana be ianao. Noho izany dia mila RAM bebe kokoa izy hiasa tsara. Ny tena zava-dehibe kokoa, raha milalao mody hafa ianao, dia handoa vola ny rafitrao.
Amin'ireto tranga ireto dia mety ho lasa sarotra be ny milalao tsara ny lalao. Hahita lagika sy kamo ianao ao amin'ny FPS. Ankoatry ny lag, ny interface dia mety manomboka mamaly miadana ary hianjera mihitsy raha tsy ampy ny RAM amin'ny fomba rehetra. Mety hahatsapa ho tsy afa-manoatra ianao mandritra ireo tranga ireo, saingy misy fomba iray ahafahanao manokana RAM bebe kokoa amin'ny Minecraft.
Voalohany, hiomanana amin'ny fizotrany dia alao antoka fa havaozina ny mpandefa ampiasainao. Jereo ihany koa ny fanavaozana ny lalao. Tsara kokoa ny manao azy alohan'ny hanombohanao ny fomba hisorohana ny olana rehetra.
Manaraka, alao antoka fa manana RAM fanampiny azonao ampiasaina ianao. Raha tsy manana RAM ianao dia tsy misy antony tokony hanarahana io fomba io. Ny fitsipika ankapobeny amin'ny ankihibe dia ny fitsitsiana RAM 1 GB farafahakeliny ho an'ny fizotran'ny rafitrao. Mety handany tolotra be io rafitra io, saingy mendrika ny varotra satria ny Minecraft dia tsy hampiasa RAM feno mihitsy.
Ka raha manana RAM 4 GB ianao dia tokony hampiasa 3 GB ho an'ny Minecraft tsara indrindra. Raha RAM 8 GB dia 7 GB (na enina raha te hitahiry RAM bebe kokoa ianao). Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny fanjifana RAM Minecraft mahazatra dia 2GB, ka na dia omenao 6 GB RAM aza dia hanana RAM intelo kokoa.
Ny fomba mahazatra ny mpanjifa:
Raha mampiasa ny mpandefa an'i Minecraft ianao, dia mila manao kaody vitsivitsy ianao. Aza matahotra ve ianao! Tsy zavatra midadasika velively! Saika ny olona rehetra afaka manao izany haingana. Ny hany mila ataonao dia manova zavatra tokana. Andao hojerentsika haingana hoe:
Mandeha Mpandefa Minecraft , ary raha manana kinova na maody mihoatra ny iray ianao dia mila misafidy an'io kinova manokana tianao hizarana ny RAM io. Azonao atao izany amin'ny kinova na mode rehetra anananao.
Hamarino tsara fa mandeha amin'ny Installations ianao ary safidio ilay kinova tianao. Any ianao dia hahita safidy iray hilalao na safidy fametrahana (teboka telo). Tsindrio ny toerana misy anao, ary avy eo dia hahazo drop-down ianao mba hisafidianana ny Edit.
Hisokatra ny varavarankely vaovao, ary afaka mikorisa ambany ianao hahita ny tohan-kevitr'i JVM. Ao anatin'io boaty io dia hahita lahatsoratra sy abidia kisendrasendra be dia be ianao. Tokony hifantoka amin'ity '-Xmx2G-' izay kaody fizarana ondrilahy ho an'ny mpandefa anao ity ianao.
Ankehitriny ny ‘2’ dia misy ny habetsaky ny RAM ho laniny. Azonao atao ny manova azy mivantana ho 3, 4, 6, na zavatra tianao.
Mitandrema ary aza manova zavatra hafa. Hamarino indroa raha tsy maintsy atao, ary avy eo tsindrio ny Save.
Indraindray momba ny mombamomba azy io, ary mety lasa profil hafa io. Ka alohan'ny handefasana ny lalao dia zahao ny fizahana roa heny hahazoana antoka fa nifantina ny endrika mety handefasana sy hilalaovana azy ianao.
Mora kokoa ny mampiasa ATLauncher hanamboarana ny fizarana RAM. Ny hany mila ataonao dia ny manokatra ny ATLauncher ary mandehana any amin'ny toerana misy anao.
Ho hitanao ao ny Minecraft / JAVA. Eo amin'ny menus ambony no misy azy, ka kitiho eo.
Avy any ianao dia afaka mahita mora foana ny ‘Maximum Memory / RAM’ sy ny soatoavina eo alohany.
Ankehitriny ianao dia afaka manoratra tanana na mampiasa zana-tsipìka hampitomboana na hampihenana ny fanjifana RAM.
Alao antoka fa hitahiry vola, ary afaka mandeha ianao.
Izay ihany no mila ataonao.
Araho ho an'ny mpandefa hafa:
Saika ny mpandefa hafa rehetra toa ny mpandefa Twitch ary ny seho fampisehoana ‘Allocated Memory’ ao anaty toerana. Azonao atao ny miditra amin'ny sehatra mora foana. Raha tsy hitanao ao ilay memoara natokana dia azonao atao ny mandeha any amin'ireny sehatra JAVA ireny. Ny fandefasana sasany dia mety manana 'Minecraft' ao amin'ny toerana tokony hanovanao.
Na izany na tsy izany dia mitovy ny fizotrany. Mandeha any amin'ny fahatsiarovana natokana ianao ary mampitombo na mampihena ny RAM ary avy eo mitahiry ny fikirana.
Ny RAM no mamaritra voalohany ny zava-bitan'ny lalao hilalaovana azy amin'ny fomba mandaitra. Tsy mila miahiahy momba ny GPU na fepetra hafa ianao. Raha milalao an-tserasera amin'ny tontolo misokatra ianao dia mila ny hafainganam-pandehan'ny optimum optimum, ary dia izay ihany.
Fantatrao izao ny fomba hanokanana RAM ambony kokoa ho an'ny Minecraft. Azonao atao aza ny manokana RAM feno. Tsy toy ny Minecraft hampiasa output RAM faran'izay betsaka amin'ny fotoana rehetra. Na izany aza, tsara kokoa hatrany ny mahatadidy ny fitsipika ankapobeny ary mitsitsy RAM 1 GB ho an'ny asa sy fizotrany hafa.
Aza adino, ireo fizotrany ireo dia natao ho an'ny lalao sy mpandefa Minecraft mahazatra. Voalohany indrindra, azonao ampiasaina amin'ny PC amin'ny fomba mahomby izy ireo. Raha manana fitaovana hafa toa ny sehatra android ianao, dia mety mampiasa mpandefa olona tsirairay ary afaka manaraka ny fizotrany mitovy.
Ankafizo àry ny Minecraft tsy misy fihemorana na fihenan'ny fampisehoana. Mirary fahafinaretana ary zarao ny fahendrena!
Hevitra momba ny hoditra Minecraft tsara indrindra (2020)
Lalao Twitch Prime Free
Fotoana sy datin'ny fandefasana ny lalao ady amin'ny vanim-potoana faha-2 ao anatin'ny 5 segondra!
Luke Bryan dia nanambara ny fitsidihan'ny fahavaratra sy fararano 2022!
oroka anime ampahany iray
Amazon karatra fanomezana 500 dolara maimaim-poana
afaka mijery tv antsamotady amin'ny ps4 ve ianao
ahoana ny fomba ahazoana prime amazon raha mpianatra ianao